St. Kitts & Nevis iji meghee ókèala na Ọktọba
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » St. Kitts & Nevis iji meghee ókèala na Ọktọba
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Na mkparịta ụka ndị nta akụkọ taa, Mịnịsta Ala nke St. Kitts & Nevis, Dr. Hon. Timothy Harris, kwuputara na Federation na-atụ anya imeghe ókèala ya, Ọktoba 2020. Nke a ga-enye ohere maka ịmaliteghachi njem ụgbọ elu na ikuku na-ebu ndị njem mba ofesi banye ọdụ ụgbọ mmiri nke Federation.
Na njikọ nke imeghe ókèala, Mịnịsta Ala kwupụtara na isi ụlọ oriri na ọ Federationụ Federation na-anọgide na-etinye aka na ngalaba ndị njem. St. Kitts Marriott Resort na Park Hyatt St. Kitts ga-emepe ọzọ na Ọktọba 2020. Obodo Ọkụ Fọdherman nke Park Hyatt meghere na izu gara aga na Fraịde, August 7, 2020. Koi, nchịkọta Curio site na Hilton nkwari akụ, ga-emegheghachi na nkeji nke anọ nke 2020 Royal Royal Kitts Hotel na-arụ ọrụ ugbu a na mbelata ikike ya. Oge anọ nke Nevis ga-ekwupụta n'oge na-adịghị anya imeghe atụmatụ.
Na nkwadebe maka imeghe ókèala, St. Kitts Tourism Authority, Nevis Tourism Authority na Minista nke njem na ndị Minista nke Ahụike na Ọdụ ụgbọ elu na-eduzi ọzụzụ maka ndị ọrụ njem njem njem 5,000 karịrị XNUMX gụnyere ụlọ oriri na-efu na ha. Ọzụzụ a bu n'uche ịkụziri ndị nwere oke na usoro ahụike na nchekwa na ụkpụrụ ga-ezute iji nweta asambodo "Njem Kwadoro Njem" na akara n'aka ndị ọrụ njem njem dị iche iche nke a ga-achọ ka ha rụọ ọrụ.
A na-emezigharị usoro a na ndụmọdụ nke Onye Ọkachamara Ọgwụ, Onye Isi Ọgwụ na Ndị Ọrụ Ahụike. Na ndụmọdụ ha, Federation kwadoro nke ọma. St. Kitts & Nevis nwere ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ekwenyesiri ike na steeti CARICOM nwere onwe ha na mkpokọta 17 na 0 na-arụ ọrụ n'oge a na 0 nwụrụ ruo ugbu a. Nke a bụ nsonazụ sitere na "ọha mmadụ niile" na-agbaso usoro iwu a gụnyere ịgbaso usoro mmekọrịta, ịsa aka na mkpuchi nke na-adịgide.